Ogaden News Agency (ONA) – OYSU South Africa iyo maamulka JOKA oo marti Qaaday Arday Mareykan ah
OYSU South Africa iyo maamulka JOKA oo marti Qaaday Arday Mareykan ah
Xafiiska jaaliyada JOKA ee Johannesburg iyo Xubnaha OYSU South Africa ayaa kulan laqaatay arday Mareykan ah oo Koonfur Afrika u imaaday baadhitaan (PhD research) uu ka qorayo taarikhda Afrika. Ardaygan oo lagu magacabo,Daniel Thomson ayaa wuxu dhigtaa jaamacada University of Miami, qaybta taarikhda.
Maamulka OYSU iyo JOKA ayaa si qodo dheer ugu sharaxay taariikhda wadanka Ogadeniya waxayna daawadsiiyeen filim ka hadlaya – History of Ogaden – oo aad u dheer waxayna ku wareejiyeen Boogaaga taariikh ah iyo cajalado ka hadalaya xaaladda Ogadeniya. Mr.Daniel Thomson ayaa uga mahada celiyey marti qaadka ay u fidiyen Ururada Arimaha bulshada ee reer ogadeniya iyo soo dhaweyntaa uu ku helay dad aqoon badan u leh Geeska Africa iyo Ogadeniya, waxuuna ka sheekeyey laftiisuu taarikhda Ogadeniya isagoo xusay in Ogadeniya uu yaqaano una yaqaano inuu yahay wadan wadan kale uu gumaysto. Wuxuu balan qaaday in xaalada Ogadeniya iyo taariikhda dalka uu kitaabka ku darsan doono jamacadiisana kula noqon doono lana shaqeyn doono jaaliyadaha Ogadeniya ee USA iyo caalmkaba.
Wuxu yidhi mid kamid ah macalimiinteyda ayaa ii sheegay in wadankaasi yahay mesha caalamka ugu xun xaga saxaafada iyo xuquuqda bini adamnimadaba, waxay aheyd ayuu yidhi 4sano ka hor. Waxaan ku farxasanahay in aan helay xaqiiqdii uu ii sheegayey macalimkasi. Mr.Daniel Thomson iyo xubnaha reer ogadeniya ayaa ku dardarmay wada shaqeyn.